Wax Ka Qabashada Wax-u-Dhameynta Waa Muddo Kale Oo Loo-Dagaalamayo Daroogooyinka • Dawooyinka Inc.eu
1 Guri xiritaan
2 Falalka u diyaargarowga dembiyada
3 Dagaalka daroogada
Iyadoo la raacayo Qodobka 13b ee Sharciga Opium, duqa magaalada ayaa loo idmay inuu amar ku soo rogo qasab maamul haddii uu ku jiro guri ama qol ama hanti la xiriirta:
walax sida ku xusan liiska I ama II ama loogu talagalay sida ku xusan qodobka 3a, baaragaraafka shanaad, waa la iibiyaa, la keenaa ama la siiyaa ama waa loo joogaa ujeedadaas;
b. shay ama walax sida ku xusan qodobka 10a, baaragaraafkiisa koowaad, oo ka hooseeya 3 °, ama Qodobka 11a ayaa la heli karaa.
Marka la soo koobo, duqa magaalada wuxuu talaabo ka qaadi karaa asaga oo ka duulaya qodobkaan iibinta daroogada sharci darrada ah ama ka soo horjeedka beerashada xashiishadda sharci darrada ah. Laakiin tan iyo Janaayo 1, 2019, qodobku wuxuu sidoo kale khuseeyaa xaaladaha ku lug leh falalka u diyaargarowga fal dambiyeed ee ganacsiga ama soo saarista daroogada.
Xiritaanka guri ama qol waa qaabka ugu dambeeya ee qasbid maamul. Sida laga soo xigtay Xarunta Kahortagga Dambiyada iyo Amniga. CCV, Codsiga qasabka maamulka “wuxuu ku yeelan karaa cawaaqib aad u fog kuwa ku lugta leh, gaar ahaan dadka degan guri”. Meel furan albaabka, haddaad i weydiiso.
Codsiga qasabka maamulka waa la oggol yahay oo kali ah markay jirto 1) xaalad mamnuuc ah ama ku xadgudub sharci qaanuuni ah iyo 2) muhiimada ficilka dhabta ah oo si taxaddar leh loo dhiirrigeliyay iyo 3) qiyaasta lagu soo rogayo ay tahay mid macquul ahaan u dhiganta xadgudubka iyo qiyaas qafiif ahi waxba tari maayo. Intaas waxaa sii dheer, shuruudaha saamiga iyo kaabista waa in la buuxiyaa.
Si loo buuxiyo shuruudahan, waxaa habboon in la dejiyo habka loo marayo goobaha iibka sharci darrada ah ee maandooriyaha iyo beerashada xashiishadda sharci darrada ah ee siyaasadda. Haddii degmo aysan dejin siyaasad, dhaqan gelintu weli waa suurtagal, laakiin dhiirigelinta go'aanka ayaa noqon doonta mid aad u dhib badan, sida ku xusan CCV.
Xaqiiqda ah in duqa magaalada loo fasaxay inuu amar ku soo rogo qasab maamul macnaheedu ma aha in duqa magaalada uu si otomaatig ah u xiri karo dhisme ama guri. Codsiga qasabka maamulka waa waxa loogu yeero "cunaqabateyn soo kabasho" waxaana loogu talagalay in lagu joojiyo xadgudubka (akhri: ka ganacsiga daroogada) iyo in laga hortago soo noqnoqoshada. Xiritaanka dhisme ama guri waa xalka ugu dambeeya (miciinka ugu dambeeya). Duqa degmadu wuxuu kaloo qaadi karaa tallaabooyin fog-fog, sida digniin ama amar ciqaab muteysan kara.
In gabal fiican Michelle Bruijn (Jaamacadda Groningen) wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa dhibaatadan. "Dagaalka maamul ee ka dhanka ah dambiyada daroogada: Dagaalka lagula jiro mukhaadaraadka oo loo asteeyey qaab lagu wiiqayo". Falanqaynta mandiil-fiiqan, waxay ku aragtay in daroogooyinka xitaa aysan u baahnayn inay joogaan, ilaa iyo inta la muujin karo in iibinta ama soo saarista daawooyinka lagu diyaariyo walxaha ama walxaha ku jira dhismaha.
Xaqiiqda ah in dowlada “ay ku muujineyso qoraalka sharaxaadda in ballaarintani ay tahay mid la jecelyahay si meesha looga saaro qulqulka iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha ee dhismaha isla markaana looga hortago buuqa iyo xumaanta deegaanka” ayaa sababaya inay waji gabax ku dhacdo. Dhaleeceynta u qalmida xiritaanka guryaha ee cunaqabateynta dayactirka waxay kordhin doontaa oo keliya haddii ay dhacdo xirnaanshaha diyaarinta beerashada ama ganacsiga. Xaqiiqda ah in dowladda, qoraallada sharraxaadda ee soo-jeedinta ballaarinta, ay ku muujineyso kalsoonideeda howlaha ka hortagga ah ee 'awoodda xiritaanka' - oo ah muuqaal caan ah oo ciqaab ciqaabeed ah - kuma soo kordhinayso arrintan. ” Awoodda duqa magaalada ayaa sii fideysa. Dhawr cilmi baarayaal ah ayaa muujiyey dhaleeceyntooda ku saabsan tan, badanaa sababta oo ah waxay u egtahay in haddii fal dambiyeedka magdhaw laga bixiyo isticmaalka tallaabooyinka maamulka. Qodobka 13b ee Xeerka Opium looma abuurin tan, ayay tidhi Michelle Bruijn. Waan ku raacsanahay si kal iyo laab ah.
Marka laga hadlayo wax ka qabashada qaran dumiska, badhasaabyadu runtii waa ay sii kordhayaan iyaga oo xidhay guryaha Sidaas oo kale duqa magaalada Rotterdam ee 2019 in ka badan 90 guri ayaa la xiray waana la galay gobolka Friesland In ka badan 50 dhisme ayaa horey loo xiray sanadkan.
Falalka u diyaargarowga dembiyada
Dhismooyinka waa la xiri karaa oo keliya haddii la helo beero ama daroogo xashiishad ah oo sharci-darro ah, laakiin sidoo kale haddii ay jiraan falal dambiyeed loogu diyaargaroobayo ka ganacsiga ama soo saarista daroogada.
Toddobaadkii hore Loosdrecht oo ah iibiyaha wax soo saarka tubaakada xiray tuhunka fududeynta soo saarista daroogada iyo tahriibinta.
Xaaladdan oo kale waxaan la macaamileynaa shirkad iibisa waxyaabo awood u siinaya ka ganacsiga daroogada ballaaran. Markaa waa inaad ka fikirto goynta wakiilada, boorsooyinka, shaambadaha, tuubooyin iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin soo saarayaasha daroogada iyo kuwa ka ganacsada. Sidaa darteed shirkaddani waxay gacan ka geysataa sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka daroogada, oo sababa dhibaatooyin badan. Taasina waa la ciqaabi karaa. "
Sida laga soo xigtay Siyaasadda ee degmada Wijdemeren, awoodda xiritaanka duqa magaalada waxay la xiriirtaa ficillo ciqaab ah sida ku cad Qodobbada 10a iyo 11a ee Sharciga Opium. Qodobadani waxay u baahan yihiin in qofka shay ama walax uu ku haysto gurigiisa ama deeganka ama daaqadda la xidhiidha, ogaado ama haysto sabab culus oo looga shakiyo in shayga ama walaxda loogu talo galay diyaarinta, ka shaqaynta ama soo saarista daroogooyinka adag ama baaxad weyn ama ganacsi sharci darro lagu beerto xashiishadda. Sidaas awgeed duqa magaalada waa inuu muujiyaa in qofka ay khusaysaa ogyahay ama ay jirto sabab culus oo uu uga shakiyo in walxaha ama walxahaasi loogu talo galay, waxyaabo ay ka mid yihiin, beerista, soo saarista ama iibinta daroogada.
Marka la eego hadalada duqa magaalada ee ku saabsan kiiskan, waxaan la yaabanahay haddii aan arimahan loo weecin doonin kiiskan. Xaqiiqda kaliya ee ah in shirkadu iibiso walxaha ama walxaha ka dhigaya ka ganacsiga daroogada baaxada weyn macnaheedu maahan in falal dambiyeed la galay. Falalkan waxaa kaliya oo la ciqaabi karaa haddii la muujiyo in qofka ay khusayso uu ogaa ama uu lahaa sabab culus oo uu uga shakiyo in walxahaas ama walxahaasi ujeeddadaas laga lahaa. Taasi ma sahlana.
Sheyada ama walxaha noocee ah ayaa runtii ku lug leh Marka loo eego Qadka Siyaasadeed ee Dowladda Hoose ee Rotterdam, tilmaamayaasha soo socda waa in lagu xisaabtamaa:
Nooca maaddooyinka ama alaabada. Tan waxaa ka mid noqon kara haysashada walax kiimiko ah, qalab ama waxyaabo la xiriira oo aan loo isticmaali karin ama dhib loo isticmaali karin qaab kale marka laga reebo soo saarista, ganacsiga ama daabulidda daroogada.
Baaxadda ay alaabtu tilmaamayso in loogu talagalay ka ganacsiga daroogada.
Isku darka walxaha la helay. Tan waxaa ka mid noqon kara isla mar iibinta ama haysashada alaab loogu talagalay in lagu farsameeyo (baaxad weyn), gaadiid ama diyaarinta daroogooyinka (miisaanka gram, baakadaha daroogada, wakiilada goynta).
Tirada walxaha ama alaabada la helay.
Darajada ka warqabka guriga ee alaabada noocaas ah lagu iibin karo, lagu ganacsan karo ama lagu isticmaali karo.
Sidaas darteed waxay khuseysaa nooca maaddooyinka ama alaabada, isku darka maaddooyinka ama alaabada, xaddiga maaddooyinka ama alaabada, illaa iyo inta ay walxaha ama alaabtu tilmaamayaan in loogu talagalay ka ganacsiga daroogada iyo heerka aqoonta ee hantida. halkaas oo lagu iibin karo, lagu ganacsan karo ama lagu isticmaali karo.
Fadlan la soco in ay khuseyso walxaha sharciga ama badeecadaha ay dhigeyso xaalad gaar ah dowladda, taas oo si lama filaan ah u sameysa falal dambiyeed. Ma aha walxaha ama badeecadaha kuwa sharci darrada ah, laakiin waxa ku dhaca maaddooyinkaas ama alaabtaan, sida loo isticmaalo iyo in iibiyaha ay ahayd inuu ogaado.
Badhasaabyadu sidoo kale ma dacwayn doonaan bol.com, amazon.nl ama dukaamada wax lagu kariyo ee qaaliga ah hadii ay iibiyaan warqada wax, boorsooyinka lagu xidho ama miisaanka gram? Malahayga maya. Laakiin sida mid iibiyaha alaabada tubaakada ama dukaan smart wuxuu iibiyaa isla badeecadaha, dhismaha wuu xirnaan doonaa mudo dhan 6 bilood maamulkiina waa lala wareegi doonaa.
"Wax ka qabadkan waxaan ku garaacnay shabakad sahlaysa ka ganacsiga daroogada iyo soosaarka waxaana u dirnay calaamado shirkadaha la midka ah," ayuu yiri duqa magaalada. Nooca shirkaddu sidaas darteed inta badan waxay go'aamisaa in Adeegga Xeer-ilaalinta Guud iyo duqa magaalada ay damacsan yihiin inay wax ka qabtaan iyo in kale. Taasi waa lid ku tahay uun dhammaan mabaadi'da guud maamul wanaagsan.
Xaggee baan ku aragnay tan ka hor? Dhab ahaan, oo leh ficilka dukaanka. Alaabada sharciga ah ee si fudud looga heli karo dukaamada qalabka ama xarumaha jardiinada ayaa sharci daro noqda sababo la xiriira duruufaha lagu iibiyay. Dhibaatada kaliya ayaa ah inay noqoto OM markale iyo markale uu dib ugu yeedhay garsooruhu. Laakiin markaa dhaawaca mar hore ayaa la sameeyay, walxaha ama alaabada mar horaba (si xaqdarro ah) ayaa loo baabi'iyay dukaankuna waa xiran yahay Sida muuqata, wax walba waa loo oggol yahay habka lagu wiiqayo (akhri: dagaalka daroogada), xitaa hoos u dhigista ku dhaqanka sharciga ee dowladdu si xamaasad leh u higsaneyso inay ilaaliso.
dembigo'aan qaadashodaroogadasharci ahaansharci-dejintaNederlandpolitiesiyaasaddadawooyinka caqliga lehmukhaadaraadka syntheticsharciga
Lubnaan ayaa sharciyeynaysa beerista xashiishadda
Marka la eego aqbalaadda sii kordheysa ee marijuana oo ah daroogo madadaalo iyo dawo adduunka ah, waxaa jira ...
Cannabis ka yimid Macedonia wuxuu ku tartami karaa suuqa hadda jira ee Yurub
Xashiishadda dawada ee ka timaadda Macedonia ayaa dhawaan laga heli karaa Jarmalka iyo Poland. PharmaCann Polska waa ...
FDA-da Mareykanka waxay diideysaa alaabada CBD-ka buuxa sida dheellitirka cuntada
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa ka soo horjeestay codsi ka yimid Charlotte's Web Holdings Inc.